NAB 2019 ၏ထိပ်တန်း Hot ခေါင်းစဉ်သုံးခု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 NAB ပြရန် » NAB 2019 ၏ထိပ်တန်းသုံးဟော့ခေါင်းစဉ်များ
Jon Finegold, Signiant CMO အားဖြင့်
ကျနော်တို့လုံးဝ NAB ၏လေဘွေပြီးနောက်အခြေချမီ, ငါယခုနှစ်ပြပွဲအပေါ်အနည်းငယ်ထင်ဟပ်ဝေမျှချင်တယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောပြောဆိုမှုများအတွက်မျက်နှာပြင်ဖို့အကြောင်းအရာများကြောင့်ပူဖောင်းကိုနားထောငျဖို့အမြဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ယခုနှစ်တွင်တကယ်ထွက်ရပ်သုံးခု themes များရှိခဲ့သည်။
1 ။ ကျနော်တို့ကမျိုးစပ်-မိုဃ်းတိမ်သည် / Multi-မိုဃ်းတိမ်သည်ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏
အရာတစ်ခုမှာရှင်းပါတယ်။ မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်စပ်-မိုဃ်းတိမ်သည် / Multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုကမ္ဘာကြီးဆီသို့လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသည်။ ဤသည်ပြပွဲပတျဝနျးကငျြအမြိုးမြိုးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရောင်းချသူထံမှ messaging နှင့်စာနယ်ဇင်းလှုပ်ရှားမှုအများကြီးသာပျံ့နှံ့နေတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများအတွက် Signiant တဲအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ် key ကို takeaways:
အဘယ်သူမျှမတ All-In သွားခံရဖို့တစ်ခုတည်းရောင်းချသူနှင့်အတူပေါ်လာသည်။ တောင်မှ Netflix, အမေဇုံက Web Services ကများအတွက်ပိုစတာကလေးတခါ, Google မိုးတိမ်ပိုမိုလုပ်နေတာခံရဖို့ပုံရသည်။ ငါတို့သည်လည်း On-ဝုဏ်အတွင်းသိုလှောင်မှုနဲ့ cloud storage ကိုတစ်ဦးရောနှော အသုံးပြု. အများဆုံး Signiant ဖောက်သည်ကိုမြင်လျှင်, နှင့်မျိုးစုံရောင်းချသူထံမှပိုပိုပြီးပါတယ်။
မိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုများကို commoditized မရှိကြပေ။ အဆိုပါကြီးတွေရောင်းချသူတဦးတည်း-အထိတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းဖို့ခွဲခြားနှင့်ဆက်လက်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ မိုဃ်းတိမ်စစ်ပွဲများအပေါ်များမှာ!
မိုဃ်းတိမ်ကိုရောင်းချသူအလေးအနက်ထားမီဒီယာယူပြီးနေကြသည်။ မီဒီယာအသစ်တိကျတဲ့န်ဆောင်မှုများထွက်ရှင်းပြီနှင့်ရောင်းချသူကြီးမားသောမီဒီယာလုပ်ငန်းစုကြီးများနှင့်အတူရေရှည်အပေးအယူညှိနှိုင်းများစွာသော key ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းခံရသောအကြိုးမရှိခဲ့ကြပြီ။ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုမိုဃ်းတိမ်စျေးသည်၏ရေဒါပေါ်မှာရှေ့နှင့်အလယ်ဗဟိုကြောင်းအားလုံးညွှန်းကိန်းရှိပါသည်။
အဲဒီ options ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အရှိန်အဟုန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကိုအပြုသဘောခေတ်ရေစီးကြောင်းနေမြဲနေစဉ်, ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန်ထမ်းများအတွက်, ဒီထက်ပိုပြီးမပေးရှုပ်ထွေးဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်တစ်ဦး abstraction အလွှာအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်အဖြစ်မျိုးစုံသိုလှောင်မှုအမျိုးအစားများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းများ၏ရှုပ်ထွေးဖယ်ရှားခြင်း, Signiant အဘို့ကြီးသောသတင်းဖြစ်ထွက်လှည့်မျိုးစုံသောမိုဃ်းတိမ်ရောင်းချသူနှင့်, သင်တန်း, ပထဝီဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိန်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ တစ်ဦး variable ကိုအဖြစ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးဖောက်သည်များထဲမှတစ်ခုမှာမိမိတို့၏ switching ကုန်ကျစရိတ်သူတို့ရဲ့ Signiant ပေါ်တယ်သို့ logging နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ထားစျေးသည်မဆိုမှာလုပ်ငန်းအသွားအလာညွှန်ပြသကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောများမှာအဖြစ် Signiant, တစုံတယောက်သောသူသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုရောင်းချသူအပေါ်သူတို့ရဲ့မှီခို minimize လုပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ သူတို့အား Workflows အတွက်လူများနှင့်စနစ်များကို switch သည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြတ်တောက်သို့မဟုတ်ပင်အသိပညာမပါဘဲလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
2 ။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်း Multi-အိမ်ငှား SaaS မှထုံးစံဆော့ဖ်ဝဲမှကူးပြောင်းနေသည်
သငျသညျ NAB ၏တနင်္ဂနွေပေါ်တွင် Devoncroft အလုပ်အမှုဆောင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ကြလျှင်, သင် Josh Stinehour, Devoncroft အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်ယခင်စက်မှုလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်မှာကျောင်းအုပ်ကြီး Analyst, ကနေမီဒီယာနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများဘောဂဗေဒမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့ကြည့်ကြည့်ဖို့တယ်။ မိမိအတင်ဆက်မှုအွန်လိုင်းပုံပေါ်လျှင်, ငါအလွန်အမင်းကအကြံပြုနှင့်ဆက်ဆက်ဒီဖြစ်ရပ်နောက်တဖန်ငါ၏အပြက္ခဒိန်တွင်လာမည့်နှစ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယောရှုရဲ့တင်ဆက်မှုများတွင်ထိုသူတို့၏ဖောက်သည်ထံမှတိုင်းအထူးမေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုကျူးလွန်စျေးသည်၏စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းပြောနှင့်သင်္ချာပြတဲ့ရလဒ်အဖြစ်န်းကျင်ခြောက်လဖောက်သည်မှာထွက်ကြောင်းအများဆုံးရောင်းချသူ max ကို, စံနမူနာအဖြစ်ပေးခဲ့သည်ရောင်းချသူကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤသည်ရောင်းချသူများအတွက်ရုံစိန်ခေါ်မှု, မီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၌ဤသက်ရောက်မှုလူတိုင်းဝန်းရံသောဘောဂဗေဒမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာမသာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသွက်လက်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, သူတို့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ထက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းအား၏အမိန့်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
မီဒီယာကုမ္ပဏီ Netflix နှင့် Amazon ချုပ်များ၏အကြိုက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကိုကြည့်အမျှအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုရှိမယ့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့စတင်နေကြသည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးက "သွက်လက်နှင့်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ငွေစု၏အကျိုးသည်၎င်းတို့၏နည်းပညာနှင့် ops အသင်းများကို '' လိုအပ်ချက် '' ကြောင်း features တွေလက်တဆုပ်စာယဇျပူဇျောဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်?"
ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွက်စဉ်းစား၌ဤပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရ, ဤသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုစားသုံးမိတွင်ကျယ်စွာန်းကျင်အများအပြားဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ NAB ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အတော်များများကမီဒီယာ Shuttle ၏မျက်နှာသာအတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ချောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစုဆောင်းဘို့ဝေးစျေးကြီးအလွန်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ကနေပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ လွန်းထုံးစံမိုဃ်းတိမ်ကိုစားသုံးမိပါတွင်ကျယ်စွာ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအများစုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခု Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, Multi-အိမ်ငှား SaaS ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည် TCO နှင့်စီးပွားရေးသွက်လက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း, နှင့်ဈေးကွက်ယခုအကျိုးကျေးဇူးများသဘောပေါက်သည်။
Signiant မှာကျနော်တို့ SaaS ၏သင်တန်းအားပေးသူဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပဲအကျိုးကျေးဇူးများကျော်လွန်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီ SaaS ယခုခေတ်ရေစီးကြောင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကြီးထွားလာရှုပ်ထွေး
ဤသည် NAB 2019 မှာအစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုထက်တစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆငျ့ကဲပို, ဒါပေမယ့်သူကမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှစ်စဉ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြီးထွားလာသည်ရှင်းပါတယ်။ သငျသညျစားသုံးသူဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာ, အချိန်မရွေး, မည်သည့် device ကိုပေါ်, content တွေကိုတောင်းဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်။ အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများ, ယခုအများအပြားဒေသများတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူအသီးအသီးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေရန်ရှိသည်။
IMF ကနဲ့တူစံရှုပ်ထွေးအချို့နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ပေါ်ထွက်လာကြသည်, ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းအတိတ်ကာလထက်ဒီနှစ်ပိုပြီးပျံ့နှံ့ဖြစ်သလိုပဲတလမ်းကြောင်းသစ်ကြီးမားသောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သေးငယ်, အလွန်အမင်းအထူးပြုပေးသွင်း၏မှီခိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် ပို. ပို. လွယ်ကူစွာ, လုံလုံခြုံခြုံနှင့်လျင်မြန်စွာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်, ကျယ်သေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများအကြားအကြောင်းအရာရွှေ့ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချပွဲစားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်ဒီအရာက Signiant တဲအတွက်ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍ Signiant အသစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်လာမယ့်ကျနော်တို့မကြာခင်ဒီမျက်နှာစာပေါ်အချို့သောကြေညာချက်များရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-04-29
ယခင်: Omnicharge: #NABShow ဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
နောက်တစ်ခု: #NABShow မှာ Live365 ။ @Live365 @NABShow
NewTek ကို New Global Channel အစီအစဉ်ဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများအားကတိသစ္စာပြုသည်